Ahoana ny fomba hanajanonana ny soso-kevitra miorina amin'ny toerana amin'ny Mac amin'ny macOS Sierra | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fomba famonoana ireo soso-kevitra miorina amin'ny toerana amin'ny Mac amin'ny macOS Sierra
Toy ny amin'ny iPhone na iPad, ny Mac antsika dia afaka mampiasa ny toerana misy antsika ihany koa mba hanomezana valiny sasany na hafa amin'ny Spotlight, Safari, Siri, Maps ... Ohatra, raha mitady cafeteria ao amin'ny Spotlight amin'ny Mac isika, raha manana navoazina ny toerana, haseho ny valiny akaiky ny toerana misy anay. Araka ny hitantsika, ny fandidiana dia mitovy tanteraka amin'ireo fitaovana finday ampiasain'i Apple. Ny fananana fampahavitrihana ny localisation dia ilaina amin'ny antony maro satria tsy tokony hataontsika izany mampiditra teny fikarohana misimisy kokoa rehefa mahita orinasa, fananganana, manao kajy ny zotra amin'ny Apple Maps ...
Saingy tsy ny mpampiasa rehetra no vonona hizara ny toerana misy azy amin'ny Mac, na dia tena ilaina aza izany indrindra raha angalarina amin'ny alàlan'ny Find my Mac. Ho an'ireo mpampiasa rehetra izay tsy te hizara ny toerana etsy ambany dia asehonay anao ny fomba Azontsika atao ny mamono azy io ka amin'ny fikarohana manaraka dia tsy miankina amin'ny toerantsika ny valiny natolotry ny serivisy Apple samihafa.
Voalohany indrindra, tadidio fa ity fiasa ity dia tsy misy afa-tsy amin'ny macOS kinova 10.12, na dia ao amin'ny kinova taloha koa misy izany fa amin'ny anarana hafa.
Atsaharo ny soso-kevitra amin'ny toerana ao amin'ny Mac
Mandeha amin'ny menio Apple izahay  ary tsindrio Taratasy rafitra.
Tsindrio izao Fiarovana sy tsiambaratelo.
ao anatin'ny Privacy tsindrio ny padlock hahafantarana ny tenantsika sy hanovana ny rafitra.
Tsindrio eo toerana, hita ao amin'ny menio ilany.
Amin'ny ampahany amin'ny zon'olombelona alehantsika Serivisy ho an'ny rafitra> antsipiriany.
Ny boaty voalohany Soso-kevitra miorina amin'ny toerana Izy io no tokony hesorintsika.
Raha manao izany isika mampiasa kinova alohan'ny 10.12 Tokony hesorintsika ny boaty Soso-kevitra Safari sy Spotlight.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fomba famonoana ireo soso-kevitra miorina amin'ny toerana amin'ny Mac amin'ny macOS Sierra
Inona no vaovao ao amin'ny Adobe Photoshop Elemen 15 ho an'ny mac
Ahoana no ahazoana tombony betsaka amin'ny Dock sy Launchpad?